Kedu ihe bụ CES ma ọ bụ Commerce Electronic Secure? | ECommerce ozi ọma
Usoro CES (Secure Electronic Commerce) bụ usoro ọzọ nke mejupụtara kaadị ndị ahụ ka ọ bụrụ na mgbe ịzụrụ ihe n'ịntanetị, a pụrụ iche paswọọdụ na ịzụ ahịa n'ịntanetị. Ọ bụ usoro ga-eme ka ntụkwasị obi dị ukwuu n'etiti ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa mgbe ha mepụtara nzụta ha na ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị.
Usoro CES ma ọ bụ Secure Electronic Commerce sistemụ bụ usoro dị egwu nke ebumnuche ya bụ isi zere aghụghọ, ịkwụ ụgwọ aghụghọ na kaadị akwụmụgwọ na-enweghị ọnụnọ nke kaadị ahụ ma ọ bụ na izu ohi ma ọ bụ izu ohi nke kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ debit. Nke ahụ bụ, ka ị nwee ike ịkwụ ụgwọ maka nzụta gị nke ọma na arụmọrụ ọ bụla emere site na Internetntanetị. Ebee ka aghaghi iburu n'uche na nke a bu usoro ozo nke mejuputara ichebe kaadi nke mere na mgbe azuru ahia na ntanetị, a ga-acho okwuntughe na-achoghi maka ịzụrụ ihe n'ịntanetị.
Mgbe n'aka nke ọzọ, enwere ike iwere CES dị ka ngwa ọrụ iji gbochie ọnọdụ achọghị maka ndị ọrụ klaasị ọrụ a. Nakwa obere ọdịiche n'ihe metụtara ụdị ndị ọzọ nwere njirimara yiri nke ahụ, na nke a, a ga-ahazi CES ma ọ bụ Azụmaahịa Egwu Electronic site na ụlọ akụ eletrọniki nke ụlọ akụ gị. N'ihi nke a, usoro nche A na-emekwa ka ha sikwuo ike site na ntinye nke usoro a.
1 Ntuziaka maka ịmalite ya
2 Etu esi choo njirimara mmadu?
3 Uru dị na iji sistemụ nchekwa a
4 Ebumnuche na mmejuputa ya
5 Atụmatụ maka Safezụ ahịa Nchekwa
6 Na njikọ nwere nchebe
7 Zere iji wayo
Ntuziaka maka ịmalite ya
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnụ ụtọ usoro nchekwa ndị a, ọ nweghị ihe ọzọ ị ga-eme karịa ịnakwere ụfọdụ ndị dị mfe ntuziaka maka omume. Dị ka ndị nke anyị ga-enye gị site ugbu a gawa na nke ga-achọ ka ị mezuo ha site na ugbu a gaa n'ihu.
Na mbu, ọ bụ ajụjụ maka ịhọrọ ụdị nke ịkwụ ụgwọ site na kredit ma ọ bụ kaadị debit nke enyere ya na peeji echedoro site na ihe ezoro ezo data. Site na ebe ha ga aju gi ihe ndia:
N'ikpeazụ, koodu nchekwa 3-kwekọrọ kwekọrọ nke na-egosi n'azụ kaadị ahụ.
Ha ga-ezuru oke ka ị nwee ike ịkwụ ụgwọ maka ngwaahịa ndị a zụrụ na nkwa zuru oke na ọ nweghị ihe ga-eme gị na arụmọrụ ọ bụla ị na-arụ na usoro ịkwụ ụgwọ a zuru ụwa ọnụ.
Nzọụkwụ ọzọ na usoro a abụghị oke mgbagwoju anya gụnyere itinye data ahụ. Maka nke ị gaghị enwe nhọrọ ọ bụla ma ọ bụrụ na ịnye igodo nzuzo nke nwere koodu ọnụọgụ na nke enwere ike ịnweta site na otu n'ime ụzọ ndị a na-ahụkarị. Ọ ga-abụ oge nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ gị ga-eziga gị na mkpanaka gị, site na SMS, koodu ọnụọgụ ị ga-abanye.
Mgbe n'aka nke ọzọ, echefula na ụlọ akụ gị ga-enyeburu gị ahazi kaadị site na nke ị ga-enwe ike ịkọwapụta koodu ọnụọgụ nke ị ga-abanye. Ọ ga-abụ oge dabara adaba mgbe ị ga - etinyerịrị PIN nke kaadị gị, nke bụ igodo ị na - eji na ATM iji wepụ ego.
Etu esi choo njirimara mmadu?﻿
Na usoro ọzọ, anyị ga-echeta n'oge a na ọ bụrụ na ị na-azụta ma ịnweghị CES, sistemụ ahụ mgbe ị na-akpọtụrụ ụlọ akụ gị n'ọtụtụ oge ga-emegharị gị na weebụsaịtị nke ụlọ akụ gị iji nweta ya. N'ịntanetị, ọ bụrụ na ọ bụghị , kpọtụrụ ụlọ akụ gị ma rịọ maka CES gị. N'echiche a, ekwesiri ịmara na imirikiti ụlọ ọrụ ego na-enye ndị ahịa ha ọrụ a, n'otu usoro ma ọ bụ ọzọ.
Site na ebe ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ nwere ike ịrịọ CIP site ugbu a gawa. Ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, Usoro njirimara nke onwe. Site na ndabara, nkwado bụ PIN nke kaadị ejiri ya na ATM yana NIF kwekọrọ. Mgbe ị na aka nke ọzọ, ị nwekwara ike ịrịọ CIP maka nchekwa karịa, site na weebụsaịtị nke ụlọ akụ n'oge ọ bụla.
Uru dị na iji sistemụ nchekwa a
N'aka nke ọzọ, CES, dịka anyị ga-akpọ paswọọdụ / PIN / Akara Mbinye aka dị mkpa iji kwụọ ụgwọ na azụmaahịa eletrọniki nke na-eji sistemụ nche a, yabụ ọ gaghị ekwe omume ịrụ ụdị ọrụ ọ bụla na-enweghị akụ ma ọ bụ igbe gị. enyela CES. Nke a bụ n'ihi na anyị na-arụ ọrụ na sistemụ na-egosi oke nchekwa ma na-arịọ maka Usoro CES a maka azụmaahịa kọmputa echekwara na-akwado onye ahịa 100% nchebe aghụghọ.
Ọ bụ sistemụ ị nwere ike iji zere iji aghụghọ ma ọ bụ kaadị debit zụta ihe n'ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa n'ịntanetị. Ọ bara ezigbo uru ịhazi ọrụ a n'ihi na ị ga-enwe obi iru ala mgbe ị na-akwụ ụgwọ akwụkwọ njirimara ndị a. Karịsịa usoro ndị ọzọ ma ọ bụ usoro ọdịnala ndị ọzọ nke ị jiri ruo oge a zuru oke.
Ebumnuche na mmejuputa ya
N'ọnọdụ niile, ị kwesịrị iburu n'uche site ugbu a gaa n'ihu na ịkwado usoro azụmahịa azụmaahịa echekwara ga-agba onye ahịa gị ume ịzụta. E-azụmahịa na-eto kwa nkeji. Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ọ dị mkpa ịnye ndị ọrụ gị nkwa ma ọ bụ usoro nchekwa maka ndị ọrụ gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ bụ oge mbụ ha na-akwadebe ịzụta na eCommerce gị.
Nakwa eziokwu ahụ bụ na ụdị nchekwa a na ịzụrụ ihe na-echekwa n'ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa na-echekwa echekwa na-enye gị nchekwa nke azụmahịa maka ma onye na-ere ya na onye zụrụ ya. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ejiri ya mara na mgbe onye ahịa ahụ na-abanye nkọwa nke kaadị kredit ya, ụlọ akụ na-ezigara ya koodu a iji kwado njirimara ya. N'ụzọ dị otú a, a na-ekepụta nkwa nchekwa abụọ, ebe ọ bụ dị ka onye na-ere ahịa ị ga-ahụ na ọ bụ n'ezie onye ọrụ zụrụ, n'otu ụzọ ahụ onye zụrụ anaghị ata ahụhụ nke izu ohi.
Atụmatụ maka Safezụ ahịa Nchekwa
N'ịbụ ndị nwere arụmọrụ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ azụmahịa, otu ebumnuche kachasị nke onye ọrụ ọ bụla ma ọ bụ onye ahịa ọ bụla bụ ichebe omume ha karịa usoro nyocha ndị ọzọ. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ụdị azụmaahịa a nwere ike ịmalite omume ndị achọghị na-emebi ọrụ site ugbu a gawa.
Nke a bụ otu n'ime ihe kpatara eji akpachara anya na anyị ga-akọwa nkenke n'okpuru. Yabụ na site n'oge ahụ gaa n'ihu ị nwere ike ịma ihe ị ga-eme n'ọnọdụ nke ọ bụla anyị ga-akọwa.
Chọta ibe weebụ nke ụlọ ahịa dijitalụ nke dị mma karịa iji zụta ngwaahịa, ọrụ ya ma ọ bụ ihe ya. N'echiche a, ọ dị mma iji ngalaba na-enye mkpọchi nchebe nke ga-abụ nkwenye doro anya na arụmọrụ anyị ga-adị mma site ugbu a gaa n'ihu.
Na njikọ nwere nchebe
Mgbe n'aka nke ọzọ, obi abụọ adịghị ya na anyị ga-arụ ọrụ na teknụzụ teknụzụ nke na-enye anyị nchekwa na ngagharị anyị ga-arụ site ugbu a gaa n'ihu. N'ezie, n'echiche a, a gaghị enwe nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị izere netwọk nke ụlọ mmanya, ebe ịzụ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa anụ ahụ, nke bụ ndị na-eweta enweghị ntụkwasị obi kasịnụ n'ụdị mmegharị a. Agbanyeghị, ihe kachasị baa uru bụ iji ngwa teknụzụ nke na - enyeghị gị obi abụọ ọ bụla gbasara nchekwa ha. Na njedebe nke ụbọchị, ị ga-ezere ụjọ na-atụ oge ụfọdụ nke nwere ike imetụta ego gị ma ọ bụ nke ezinụlọ gị ebe ọ bụ otu n'ime ebumnuche gị kachasị mkpa n'oge a.
Omume gị ga-abụ iji mepụta arụmọrụ ndị a yana nkwa niile ga-ekwe omume. E wezụga ọdịdị nke usoro azụmahịa ha ma ọ bụ njirimara nke ụlọ ọrụ dijitalụ ndị a. Nwere ike ịmaghị ya ugbu a, mana teknụzụ ọhụụ nwere ike ịbụ ezigbo ndị enyi gị maka azụmaahịa ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ihe gị yana nchekwa zuru oke.
Zere iji wayo
Otu ihe mgbaru ọsọ gị kachasị nso bụ na ịnweghị ike ịnwe ụdị nsogbu ọ bụla na ịkwụ ụgwọ maka ịzụrụ ihe n'ịntanetị. Can nwere ike nweta nke a site na ịbubata usoro nke anyị ga-akọwa n'okpuru na nke a na-agbanye n'ime CES:
Kpachara anya maka ngalaba ndị na-anaghị enye gị opekempe nchekwa na arụmọrụ.
Dowe ngwa ọrụ teknụzụ gị niile ka emelitere kpamkpam ka ha ghara ịbụ ndị omume ndị ọzọ metụrụ.
Na-arụsi ọrụ ike gbasara mmebi iwu nke ụfọdụ usoro nchekwa echedoro. Maka na ha chọrọ nyocha zuru oke site na echiche niile.
N’ikpeazụ, chebe onwe gị pụọ na ụdị kọmputa dị iche iche nwere ike ịkwado onwe ha na ngwa kọmputa. Na-ekwe nkwa na eziokwu na anyị arụmọrụ ga-mma site ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Kedu ihe bụ CES ma ọ bụ Commerce Electronic Secure?